ग्यारेन्टी ऋणको अर्थ के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki ग्यारेन्टी सुविधा
Guarantees को बैंकवेल पनि भनिन्छ। नाम भन्दा अन्यले सुझाव दिन्छ, तपाइँ सक्नुहुन्न ऋण रकम भुक्तानी। नाम ग्यारेन्टी सुविधा बैंक र अन्य क्रेडिट संस्थाहरूको विवरण र ग्यारेन्टीको लागि सामान्य शब्दको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। बैंक क्लजको अवस्थामा, तपाईंको बैंकले तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन वा बताउँछ surety माथि लिनु बदमामा, बैंकले तपाईंको शुल्क वा चार्ज चार्ज गर्दछ। एक गारंटी ऋण लोन उधार को एक विशेष रूप हो।
1 क्रेडिट ग्यारेन्टीहरूको विभिन्न संस्करणहरू
1.1 एक गारंटीको फाइदाहरू
1.2 एक ग्यारेन्टीको हानिकारक
1.3 ग्यारेन्टी ऋण कहिले सिफारिश गरिन्छ?
1.4 ग्यारेन्टी लोनको लागी आवेदन गर्दा विचार गर्नुपर्दछ
2 सम्बन्धित लिङ्कहरू:
क्रेडिट ग्यारेन्टीहरूको विभिन्न संस्करणहरू
अवकाश प्रस्तावहरू र विभिन्न रूपहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यी भेरियन्टहरू हुन्:
[सूची] [*] भुक्तानी सल्लाह
भुक्तानी सल्लाह: भुक्तानी सल्लाहको सन्दर्भमा, तपाईंको बैंकले आपूर्तिकर्तामा तपाईंको तर्फबाट ग्यारेन्टी गर्दछ कि डिलिवरी र / वा सेवाको लागि मूल्य पूर्ण र वितरण पछि पूर्ण हुनेछ।
वारेन्टी प्रमाणपत्र: तपाईंको कम्पनीले तपाईंको ग्राहकहरूलाई डिलिवरी उत्पादनको लागि एक वारंटीको दायित्वको गारंटी दिन्छ। यस ग्यारेन्टीको साथ, तपाईंको क्रेडिट संस्थाले यो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गरेको छ, तपाईंको कम्पनीले त्यसो गर्न सकेन भले पनि।
अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी: एक बैंकले तपाइँको ग्राहकलाई ग्यारेन्टी गर्दछ, जसले तलको भुक्तान गरेको छ, जुन जम्मा सेवा वा डिलिवरी पूर्ण छैन वा पूर्णतया पूर्ण छैन भने जम्मा फिर्ती गरिनेछ।
Mietaval: यस Aval मा, बैंक वा एक निजी व्यक्ति एक ग्राहक को लागि एक भाडा को गारंटी मा लिन्छ। यो ग्यारेन्टी ऋण नगदमा सुरक्षा जम्मा को जमा वा एक तथाकथित Mietautionssparbuch मा जमा को नगद रहित विकल्प हो। एक भाडामा सत्तारुढको अवस्थामा, तपाईंको बैंक वाचहरू भन्दा बढी रकमको सुरक्षा रकम र / वा क्षतिपूर्तिमा नपढिएको मासिक किराएमा प्रतिस्थापन गर्न को लागी। उदाहरणका लागि, तपाईंले 2000 यूरोको भाडाको लागि प्रति महिना केही यूरोको सानो शुल्क तिर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि।
एक गारंटीको फाइदाहरू
वित्त को अन्य रूपहरु संग तुलना, एक गारंटी को ऋण तपाईं धेरै फायदाहरु प्रदान गर्दछ: तपाईं तरलता साबित गर्न छैन र यसैले कम वित्तीय स्रोतहरु संग लेनदेन संचालन गर्न सक्छन्। चूंकि, बैंक को दृष्टिकोण देखि, यो एक ऋण होइन तर केवल एक सम्भावना दायित्व छैन, aval दर एकदम कम छ।
एक ग्यारेन्टीको हानिकारक
यद्यपि यदि तपाइँले एलाकांशको रूपमा ऋण रकम प्राप्त गर्नुभएन भने, एक बैंकोटले तपाईंको क्रेडिट मूल्याङ्कनलाई असर गर्नेछ। यदि तपाई, एक उद्यमीको रूपमा, लगातार निरन्तर ग्यारेन्टी खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईले उनीहरूको क्रेडिटलाई असर गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। ग्राहकहरु लाई मिटवलहरुलाई Schufa मा संचारित छ र यसैले तपाईंको क्रेडिट रेटिंग पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
ग्यारेन्टी ऋण कहिले सिफारिश गरिन्छ?
यदि धन कम भएमा, इक्विटी को एक विकल्प को रूपमा एक ग्यारेन्टी ऋण सिफारिस गरिन्छ। उनीहरूले तपाईंको धन बचत गर्छन् र केवल कम शुल्क तिर्न पर्छ। एक ग्यारेन्टी ऋणको साथ, तपाईं एक उद्यमीको रूपमा धेरै लचीला छन्: तपाईं एक क्रेडिट चेक को आवश्यकता बिना आफ्नो सम्पूर्ण सहयोगमा आफ्नो व्यापार साझेदारहरूको लागि ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्न एक स्थितिमा छन्। तपाईंको बैंकले यो जाँच गर्यो। विशेष गरी, ग्यारेन्टी र बिडिंग ग्यारेन्टीहरू, भाडा र ग्यारेन्टीले ऋणलाई एक उपयुक्त समाधानको गारंटी दिन्छ। व्यापारीबाट एक व्यापारी र उद्यमी को रूप मा पूर्ण देखि भरी शुल्क को रूप मा परिचालन व्यय को कटौती को रूप मा कटौती को रूप मा।
ग्यारेन्टी लोनको लागी आवेदन गर्दा विचार गर्नुपर्दछ
तपाईंले सँधै लेखनमा कम्पनी ग्यारेन्टीको लागि आवेदन गर्नु पर्छ। अनुप्रयोगलाई बैंक शाखामा पेश गर्नु पर्छ जसको साथ आवेदनको समयमा कुनै सम्बन्ध छैन। प्रयोगकर्ताहरूको पक्का भरोसा सम्बन्धी अनुप्रयोगहरू पनि अनलाइन अनुरोध गर्न सकिन्छ। लामो अवधिको ग्यारेन्टीको स्थितिमा, सेट अप लागत भन्दा हालको उडान शुल्कको रकम अधिक महत्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ छोटो-अवधिको ग्यारेन्टीको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ भने, सेटअप शुल्कको रकम थप महत्त्वपूर्ण छ।
दर्जा: 2.0/ 5। 1 मतदान बाट।
अघिल्लो लेखBagatell क्रेडिट
अर्को लेखक्रेडिट deducting